अप्रत्यसित यात्रा संग जोडिएका प्रश्न ? - USNEPALNEWS.COM
अप्रत्यसित यात्रा संग जोडिएका प्रश्न ?
- चन्द्र सिंह भट्टराई प्रकाशित मिति: May 20, 2017
कहिले काही हरेकका जीवनमा अप्रत्यासित यात्राको अवसरको सम्भावना र क्रम घटित हुने गर्छ । यस्तै अवसर अमेरिका पुग्नु र कोलाराडो, डेनवरबाट गत चैत्र ३० गते काठमाण्डौका लागि हिडदा जुरेको थियो । गत फाल्गुन २६ गते बिहान लगभग ९ः०० बजे कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ४ आनन्द बजार वरिपरी दश गजामा १५।२० मिटर नजिक भारतीय सशस्त्र बलको जवानको गोलीबाट गोविन्द गौतमको हत्या भएको आरोप छ । यसरी शहीद हुन पुगेका ३०।३२ बर्षिय गोविन्द गौतमको परिवारलाई राज्य र विभिन्न संघ संस्था र व्यक्ति समुहले सक्दो आर्थिक सहयोग गरे । यही क्रममा अमेरिका, कोलाराडो डेनवर ग्रीलिका निरंकार पंथको १०० डलरको योगदान सहित उनको सक्रियतामा २५० डलर ७ जना नेपालीले संकलन गरेका थिए । देख्दा न्यून भएता पनि विदेशमा बस्ने साधारण कामदार नेपालीहरुको राष्ट्र प्रेमको यो एउटा सुन्दर पक्ष हो । सोही रकम सम्वन्धित परिवारलाई बुझाउन पंथजीले निजको नेपाल पुग्ने कार्यक्रम स्थगित भएकाले मलाई जिम्मा लगाएको हुनाले मेरो कञ्चनपुर आनन्द बजारको यात्राको अवसर जुरेको थियो ।
घटनाको पृष्ठभूमि–पुनर्वास नगरपालिकाले नजिकको भारतीय स्थानीय बजार तिर जाने बाटोमा दशगजा नजिक नेपाली सीमा क्षेत्रभित्र २०।२५ मीटर वर एउटा कल्वर्ट निर्माणका लागि केही रकम विनियोजन गरेको थियो । सोही रकमलाई उपयोग गरेर तिनवटा हूम्पपाइम ओच्छयाई कलवर्त निमाण गर्दा विवाद भएको थियो । भनिन्छ यद्यपि यो निर्माण कार्यमा भारतीय पक्षको पनि सहमति थियो । तर निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि केही भारतीय उग्रपंथीहरुले गुगल नक्शाको उद्धरण दिएर उल्लेखित कल्भर्ट निर्माण स्थल भारतीय क्षेत्रधिकार भित्र पर्छ भनेर विवाद उठाएका थिए भन्ने नेपाली पक्षको भनाई छ । कल्भर्ट निर्माण पछि जेशिला नेपाली युवाहरुले आफ्ना सीमा क्षेत्रमा प्रसन्नता पूर्वक उत्साह प्रदर्शन गर्दा अपाच्य भएर भनिन्छ भारतीय सुरक्षा निकायको हवलदार जवान अरविन्द शुक्लबाट भएको गोली प्रहारबाट गोविन्द गौतम घाइते भई केही समय पछि प्रारण भएको थियो भन्ने आरोप छ । भारतीय पक्षले पक्की कल्भर्ट नभएर काम चलाउ बनाउनु पर्ने र भारतीय सीमा क्षेत्रको माटो उपयोग नगर्नुपर्ने किसिमका हलुका तर्क पनि सुनिएको छ । यदि यस्तै तर्क हुने भने यस्ता तर्कले गोली प्रहारको औचित्य पुष्टि हँुदैन ।
स्व. गोविन्द गौतमको पृष्ठभूमि – उनी एउटा सामान्य परिवारका एक्लो सहारा थिए । केही समय मलेसिया तिर बैदेशिक रोजगार गरेर फर्केका युवाको कुनै उल्लेखनीय राजनैतिक भूमिका थिएन । ०५१।०५२ साल देखि सीमा क्षेत्रमा उत्साही वामपंथीहरुको प्रोत्साहनले आबाद हुन थालेको बस्तीमा कच्ची पक्की दुवै खाले घर निर्माण भएको देखिन्छ । वुवा खेम गौतम आमा हरि देवी गौतम र एउटा बहिनी र श्रीमती लक्ष्मी गौतमका ३ वटा छोरी सहित नजिका माछापुच्छे्र टोलमा सामान्य घरमा गुजारा गरेर बसेका छन् । बागलुङ्गबाट बसाई सराई गरेर आएका अशक्त बुवा ७१ बर्षिय र ६३ बर्षिय आमाका लागि यो कहाली लाग्दो घटनाले भविष्य असुरक्षित बनाएको थियो । हुन त शहीद परिवारले आर्थिक सहयोथ स्वरुप अहिले सम्म ३२ लाख १२ हजार रकम र ने.का. कार्याकर्ताबाट ध.उ.म.न.पा.मा आधा कठ्ठा घरेडी पाएका छन् । विवरण निम्न प्रकार छन् ः– सरकारबाट १० लाख, नेपाली कांग्रेस ७ लाख, ने.वि.संघ ४ लाख माओवादी ६ लाख, एमाले ५ लाख, हेमन्ती शर्मा १२ हजार । तर पनि यो रकमको उचित व्यवस्थापन गर्न सफल नभएमा यो परिवारलाई छिटै निराश हुनुपर्नेछ । त्यसैले राज्यले निराश्रित यस्तो परिवारका लागि योग्यता अनुसारको रोजगार र आश्रित बाल बालिकाको शिक्षा स्वाथ्यको जिम्मा लिनु नै उपयुक्त समाधान हो ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको माछापुच्छ्र टोलमा शहिद गोविन्द गौतमका बुवालाई उपरोक्त रकम बुझाउन उनकै सभापतित्वमा एउटा श्रद्धान्जली कार्यक्रम गरिएको थियो । ने.का.का. पूर्व क्षेत्रिय सचिव हरि अधिकारीको उदघोषणमा मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मन्त्री र पूर्व ने.का. केन्द्रिय सदस्य चन्द्र सिंहह भट्टराईले सो २५,५००।– रुपैया रकम शहीदका बुवालाई हस्तान्त्ररण गरेका थिए । नगर सभापति यम प्रसाद पौडेलले घटनाको विवरण र शहिद बारे बोलेका थिए । आर्थिक सहयोगीहरु प्रविण भट्टराई, पत्रकार विकल पराजुली, भरत उप्रेत्ती, प्रदिप गौतम, सन्तोष खरेल र नारायण अधिकारीको नाम पनि उल्लेख गरिएको थियो । उपस्थितिमा ने.का. महासमिति सदस्य भरत विष्ट, महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्धु राना, विन्दु श्रेष्ठ, क्षेत्रिय सचिव देवेन्द्र खडका, नगर सभापति यम प्रसाद पौडेल, प्रजातन्त्र सेनानी बिष्णु प्रसाद बास्तोला, पत्रकार हेमन्त शर्मा (नागरिक) लगायत ५९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम पछि घटना स्थलमा सबै सहभागी साथीहरुले केही क्षण उपस्थित भएर शहिद प्रति सम्मान प्रकट गरेका थिए ।
अहिले पनि उपरोक्त आनन्द बजारमा अलि तनाबकै वातावरण छ । यो घटना अधि सीमा पारीबाट भारतीयहरु त्यहा खान पिन रमाइलो गर्न आवत जावत गर्ने गरेका थिए । घटनाका दिन आइवीआरडीका ११ भारतीयका पसलहरु प्रतिकृया स्वरुप तोडफोड गरिएका थिए । यस्तै प्रतिक्रिया बेलौरी बजार क्षेत्रमा पनि भारतीय मुलका व्यापारीहरुको पसलमा तोडफोड भएर भएको थियो । यो घटनाका कारण गृहमन्त्री विमलेनद्र निधि, भौतिक निर्माण मन्त्री रमेश लेखक, कृषि मन्त्री गौरी शंकर चौधरी, सभासद दिलबहादुर धर्ति, सभासद दिवान सिंह बिष्ट, सभासद बहादुर सिंह थापा, पूर्व मन्त्री एनपी साउद पनि त्यहाँ आयोजित शोक सभामा सहभागी भएका थिए । पिडित परिवारलाई राज्यले संरक्षण प्रदान गर्ने छ भनि गृह मन्त्रीले आस्वासन दिएका थिए ।
सीमा समस्या ः नेपाल पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा भारत संग भौगोलिक रुपले घेरिएको छ । प्रायः विश्वका छिमेकी देशहरुमा छुटपुट सीमा समस्या समय समयमा भई रहेको सामाचार पढन सुन्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारत चीन, भारत पाकिस्तानलाई पनि लिन सकिन्छ । नेपालको संन्दर्भमा भारतबाट नै सीमा अतिक्रमण भई रहेको सामाचार हामी सुन्ने गछौँ । यस्को स्थायी सामाधान सरकार पक्षको क्रियाशीलता हो । संयोगले ०७ साल पछि वी.पी. कोइरालाको प्रधान मन्त्रीत्व काल उपरान्त सीमा सम्वन्धमा राष्ट्रिय अडान लिने खुवीको अभाव अहिले सम्म अनुभव गरिएको छ । वितेका कुरालाई ध्यानमा राखी अवका सरकारले यसमा गम्भीरता साथ दुवै देशको हितका लागि सीमा विवाद यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ । हुनत सीमाको सर्भेका लागि उपरोक्त विवादित क्षेत्रमा सर्भेयरहरु खटाइएका छन् । साथै सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटनाको पुनरावृति हुन नदिन समय समयमा अनुगमन निरिक्षण क्षमतावान सुरक्षा अधिकारी द्वारा हुनु अपरिहार्य छ । कथम् कदाचित कुनै विवादित समस्या आई परेपनि उच्चस्तरमा समाधानका लागि वार्ता द्वारा समाधानमा पुग्नु पर्छ । यो घटनाले एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । – देशका लागि बलिदान हुनेलाई देश विदेशबाट नेपाली संघ संस्था र नागरिकहरुमा सहयोग र सम्मानको वातावरण निर्माण हुँदो रहेछ ।
– चन्द्र सिंह भट्टराई
पूर्व उर्जा राज्य मन्त्री र पूर्व ने.का. केन्द्रीय सदस्य
किस्ता किस्तामा देश बेचिँदै गए नेपाल भारतमा बिलय नहोला भन्न सकिन्न
महेश नेपाल	 September 23, 2016
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 November 2, 2020